Momba anay - Dongguan Pretty Shiny Gift Co., Ltd.
Dongguan Pretty Shiny Gift Co., Ltd.
Mpanome fanomezana & Premium matihanina
Mpamatsy entana fahatsiarovana vy izahay, lapel pin & badge, medaly, coin coin, keychains, badge de police, embroidery & patchy tenona, lanyard, kojakoja an-tarobia, kapila, fitaovana fametahana sy entana hafa.
Iza no iarahantsika miasa?
Ny fari-pitsipika iorenanay ho an'ny andraikitra ara-tsosialy - Low Lead, Phthalate Free ary namana ara-tontolo iainana hihaonana amin'ny fenitry ny andrana ataon'ny fikambanana iraisam-pirenena, miampy ny fiarovana ny mpiasa sy ny herin'ny tanjany manokana, ny fandefasana azy haingana, ny kalitao mahazatra ary ny vidin'ny fifaninanana, ny orinasa Dongguan dia manana nandalo fanaraha-maso ary nahazo alalana tamin'ny marika sy orinasa malaza manerantany, toa ny SEDEX, Disney, NBCUniversal, McDonald, Starbucks, Coca Cola ary Bureau VERITAS.
Tsy manana fetra MOQ amin'ny baiko izahay, azonao atao ny mametraka ny kaontinao amin'izay haben'ny habeny mifanaraka amin'ny zavatra ilainao manokana.
Fahafaham-po amin'ny kalitao
Ny bobongolo mazava, ny haitao matihanina, ny fanaovan-tsakafo tsara dia miantoka ny entam-barotra ampiharina hihaona hatrany amin'ny fangatahanao.
Raha tsy misy ny marin'ny mpanafatra na orinasa mpivarotra dia hahazo ny vidin'ny fividianana mivantana avy aminay ianao.
Miaraka amin'ny traikefa an-taonany maro, fifandraisana sy fahitana tsara momba izay ilain'ny mpanjifa, manomana mialoha ny dingana manaraka izahay ary manome serivisy matihanina feno.
Mpiasa 2500 miampy electroplating / polishing ary fandokoana mandeha ho azy, azonao atao ny miantehitra tanteraka aminay tsy misy fanahiana amin'ny fanaterana.
Manomboka amin'ny famolavolana, famokarana, QC, famonosana ka hatramin'ny fandefasana azy, mahafeno ny ilainao rehetra indray mandeha.
● Miasa Sitrapo
● Fihetsika mahery setra
● Fizarana voninahitra